Imba padivi laminated foil kuputira Kutarisana |
Inokodzera akasiyana siyana mafomu, inogona kushandiswa sekuputira uye mhute chipingaidzo kune akawanda ekuputira zvinhu, ine yakanaka kukwegura kuramba uye ngura kuramba.
Laminated kuputira yakatarisana nenzvimbo yekunze yezvinhu zvekudzivirira. Iyo yekuwedzera dura rakagadzirwa nesimbi yakasimbiswa Aluminium foil kana PP firimu. Insulation yakatarisana nezviito seyakawedzera chipingamupinyi chinobatsira kuchengetedza kuvaka kubva kuhunyoro uye kukuvara kubva kumatenga.
Iyo Laminated kuputira yakatarisana inopa matatu anokosheswa ekumisikidza mhinduro: kudziya kwekudziya, vapor chipingamupinyi, uye murazvo unodzora. Hunhu uhwu, pamwe chete, kubatsira iyo insulation system kusangana nemamaki ekuvaka, kuwana zvirinani simba rekushandisa, uye kudzora condensation.
Inoshandiswa pakubatanidza kwakapatsanurwa zvinhu senge girazi shinda, mamineral shinda uye dombo mvere, inogona kushandiswa mukugadzira tambo pamwe neyemanyorerazve kubatanidza, nekuchinjika uye kwakasiyana siyana kwekushandisa.
Rinogona kushandiswa kupisa kuputira uye isapinda pasuru zvinhu. Kune yegirazi mvere, dombo shinda, maminera emvere uye zvimwe zvinopisa zvekudzivirira zvinhu, kupisa-kuvhara chisimbiso uye vapor barriers layer, yekotoni, uye yekotoni liner pamhepo kupisa chisimbiso veneer, kusangana neHVAC duct, inotonhora uye inodziya mvura pombi Adiabatic uye vapor bamer zvinodiwa uye kuputira zvinodiwa pakuvaka simbi.
Zvakare Inogona kushandiswa seyekuputira zvinhu zvekuvaka (padenga, madziro).
Mashell emhepo inodziisa uye hita yemvura inodzivirira yekumhanyisa pombi yemvura uye pombi yemhepo
7mic aruminiyamu angazvidzvisa / Pe / kraft
Kraft rinoumba aruminiyamu foil, hapana Washington City Offices pajira riya
7mic angazvidzvisa / Pe / nzvimbo 12.5 * 12.5mm, squarefiberglass pajira riya / Kraft
square fiberglass mesh, inoyevedza pakuonekwa
Pashure: Yakapetwa mativi laminated foil kuputira Kutarisana
Zvadaro: Jira Duct Tepi
Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora, Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Tepi,